10. september 2021 - NorSom News
Assad Qaasim: Ka macalin ahaan waxbarashada, ayaan ku qiimeeyaa siyaasadda xisbiga aan u codeynayo.
Norsomnews - 10. september 2021 0
Fathia Khaliif: Doorashadu waxey saameyn ku leedahay wax walba oo nolosheena dalkan la xiriira.
Denmark: Wasiirad maxkamad saaran oo marag-fur weydiisatay Ayaan Xirsi Cali.
Dalka Denmark waxaa ka socdo maxkamadeynta wasiiradii hore ee soo galootiga dalka Denmark, Inger Støjberg oo ku eedeysan jabinta sharciga dalkaas iyo inay si...
Booliska Norway oo loo ogolaaday adeegsiga hubka korontada leh.
Sida uu qoray NRK, dowlada Norway ayaa go´aamisay in booliska Norway ay si joogto ah u wadan karaan biskooladaha korontada. Iyada oo ujeedku uu...